खुसीको खबर नेपालमा कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य ३६० रुपैयाँ मात्रै, कसरी भयो यति सस्तो हेर्नुस — newsparda.com
खुसीको खबर नेपालमा कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य ३६० रुपैयाँ मात्रै, कसरी भयो यति सस्तो हेर्नुस
यद्यपि सिरमले आफूले घाटा व्यहोरेर निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई सस्तोमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन लागेको भने होइन । गरिब देशहरुलाई सस्तोमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन अमेरिकाका अर्बपति बिल गेट्सको संस्थाले सहयोग गरेको हो ।
यस्तै अमेरिकी वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले कोरोनाको खोप बनेपनि त्यसले ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै काम गर्ने बताएका छन्। फाउची उनै हुन्, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसमा कोरोना भाइरस टास्क फोर्स सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। तर, महामारी नियन्त्रणका लागि सजगता सुझाव दिँदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उल्टै फाउचीमाथि खनिने गरेका छन्। कोरोना रोक्न सल्लाह दिने विशेषज्ञमाथि नै खनिए ट्रम्प खोप बनेपनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सजगता अपनाइरहनुपर्ने डा. फाउचीले बताएका छन्। महामारी नियन्त्रणका लागि खोपमा मात्रै भर पर्न नसकिने उनको दावी छ।
उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म खोप कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे केही थाहा छैन ।’ कोरोना भाइरसबाट अमेरिका सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यहाँ हालसम्म ४९ लाख ४० हजार ९३९ जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितमध्ये १ लाख ६१ हजार ३२८ जनाको ज्यान गइसकेको छ।संचार केन्द्रबाट साभार